दायित्व भनेको के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki बन्धन
दायित्वहरू के हुन्?
एक संग बन्धन जहाँ, एक निश्चित आय सुरक्षा (बन्धन, बन्धन) एक बंधक बन्धन वा बन्धन कागज जस्तै। बन्धन पनि बन्धन भनिन्छ। तिनीहरूले लामो अवधिमा लगानी उपयुक्त हो। सामान्यतया यो एक स्थिर दर ऋण गर्न बन्धन संग सम्बन्धित छ। यो सामान्यतया एक्सचेन्जहरू मा सरकारले वा निगमों द्वारा अप लिइएको छ। कुल ऋण धेरै ऋण मा बन्धन मा pieced छ। कुल 100, 500, 1000, 5000 र 10.000 यूरो को आंशिक ऋणपत्र विभाजित गरिएको छ। कागजातहरूमा securitized बन्धन हो, किनभने त्यहाँ जमानत छन्। यो तथाकथित बोक्ने साधन को रेकर्ड छ देखि, तपाईं मात्र यी जमानत व्यवस्था को मालिक रूपमा ऋणीहरूलाई विरुद्ध आफ्नो दावी गर्न सक्छन्।
"दायित्व" को शब्द पनि दुई पक्षहरु को बीच एक ऋण सम्बन्ध को संदर्भित गर्दछ। ऋणी बांडको विक्रेता हो। बांडको प्रदायकले ऋणको प्रयोग गर्न ऋण प्रयोग गर्दछ। तपाईं लगानीकर्ताहरूको रूपमा बन्डर पैसा प्राप्त गरेर प्रकाशकलाई ऋण दिनुहुन्छ र उनको लेनदेन हुनुहुन्छ। तपाईंले बांड खरिद गर्नुभएको मूल्य मूल्यको बराबर हो ऋणबाट, जो विक्रेता प्राप्त गर्दछ। जबसम्म ऋण पूर्ण रूपमा चुकाएको छैन, जारीकर्ताले तपाइँलाई चासो तिर्न पर्छ। एक वैध ब्याज दर एक बन्डको मुद्दामा बाध्य हुनेछ। एकै समयमा, यो पहिले नै स्पष्ट छ कि भुक्तानमा कितना समय खर्च गरिनेछ र ऋण फिर्ता तिर्न भन्दा कति समय बितेका छन्। निश्चित आय आय, उदाहरणको लागि कन्फर्डडर द्वारा जारी गरिएको बांडहरू दुवै पक्षका लागि फाइदा छन्।
बाँडका अन्य जारीकर्ताहरू
बन्धन ठूलो निगमों र राज्य अमेरिका र जहाज बंधक बैंकहरू, सार्वजनिक क्रेडिट संस्थाहरू र निजी बंधक बैंकहरू द्वारा बाहेक उल्लेख लायक छन्। यी बंधक बन्धन बंधक financed छन्। नगरपालिका बन्धन विभिन्न सार्वजनिक निगम, नगरपालिका, अमेरिका र ऋण पुनर्वित्त गर्न सरकार निजी बंधक बैंकहरू र सार्वजनिक बंधक बैंकहरू द्वारा जारी जो ऋण छन्। एक थप बन्धन ऋण "सार्वजनिक" उल्लेख गर्न रूपमा। यी बन्धन हुलाक र रेलवे बन्धन, नगरपालिका, राज्य र संघीय बन्धन छ।
एक बांड विभिन्न मापदण्ड अनुसार विभाजित हुन सक्छ। यी हुन्:
- बांडको मुद्रा
- प्रदर्शनीको उत्पत्तिको देश
जारीकर्ताको उत्पत्तिको देश: उत्पत्तिको देशमा निर्भर गर्दछ, एक बांड विदेशी वा घरेलु बन्ध हुन सक्छ।
ब्यान्डको मुद्रा: तपाई यूरोमा बांड किन्न सक्नुहुन्छ, दुवै मुद्रा बाण्डको रूपमा र घरेलू बाणिज्यको रूपमा।
टर्म: बन्ड्स तपाईंलाई छोटो अवधि र दीर्घकालिक लगानीको लागी प्रदान गरिएको छ। बांडहरूको औसत परिपक्वता अहिले 8 र 15 वर्ष बीचमा छ। विगतमा, एक्सएनएनएक्सएक्स वर्ष वा निरन्तर सम्बन्धी बन्धनहरू पनि एक्सचेंजहरूमा कारोबार गरिएको थियो।
चुकौती: बांडहरूको पुन: प्रशोधनका विभिन्न प्रकारहरू छन्: तपाइँ अनन्त बाँड र छुटकारा बांडहरू बीच आफ्नो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। एक दायित्व वा त भुक्तानीको अन्त मा वा किन्ती भुक्तान मार्फत एक-भुक्तानी भुक्तानको साथ तिर्नु पर्दछ।
ब्याज दर: ब्याज दर (9 प्रतिशत, छ र आधा प्रतिशत) मा पनि फरक छन्
ब्याज दर: एक बंधन एक गैर-ब्याज-असर, अस्थायी दर वा निश्चित ब्याज प्रतिभूति हुन सक्छ।
करण: एक बांडमा तपाईंको लगानी कर छूट, कर छूट वा कर मुक्त।
दायित्व मुद्रा: बांडहरू यूरोमा र विदेशी मुद्राहरुमा उपलब्ध छन्।
को जारीकर्ता को मूल को देश: बन्धन को जारीकर्ता देश वा विदेश मा आधारित छ कि छैन भनेर मा निर्भर गर्दछ, बन्धन घरेलू र विदेशी बन्ड विभाजित छन्।
अघिल्लो लेखमिलियन क्रेडिट